Kandidà Rajoelina tany Sava: « Mila tanora tia tanindrazana sy vonona ny firenena » | NewsMada
Kandidà Rajoelina tany Sava: « Mila tanora tia tanindrazana sy vonona ny firenena »
Nitohy tany amin’ny faritra Sava indray ny fampielezan-kevitry ny kandidà Rajoelina, omaly. Anisan’ny notsidihiny ny kaominina Marojala sy ny kaominina Ambodiangezoka. Nitohy hatrany Maroantsetra izany avy eo.
Laharana faha-13 ihany ny antsika. Mila tanora mavitrika sy vonona hanavotra ary tia tanindrazana i Madagasikara… Efa nifidy ny handroso ny vahoaka malagasy ary tsy hihemotra intsony fa efa nifidy ny hazavana”, hoy izy. Narahina asa avy hatrany izany ka nitondran’ny kandidà laharana faha-13 jiro mandeha amin’ny herin’ny masoandro ny any an-toerana, ahazoan’ny isan-tokantrano hazavana sy hamoronana asa ho an’ny tanora. Hapetraka rahateo ny ozinina hanamboatra “panneau solaire” ary hamidy mora ireo kojakoja ilaina amin’izany. Nankasitraka ireo ben’ny Tanàna marobe any Sava tonga nanohana azy ny mpanorina ny IEM ary nampanantena fa hampiakarina avo roa heny ny vola fanampiana ny kaominina.
Fotoana hanovana ny tantara izao…
Notsiahiviny fa manan-karena iny faritra iny, saingy tsy misitraka izany ny vahoaka. “Hampiakarina ny tamberim-bidy ary hanamboarana fotodrafitrasa, toy ny “piste” ao Farahalana. Homena rano madio fisotro ianareo. Hojerena ny hampiakarana ny kalitaon’ny lavanila. Manao velirano aho fa hampiakariko ny vidin’io vokatra io”, hoy izy. Teo koa ny filazany fa hananganana hopitaly manara-penitra any an-toerana. Nitaona ny rehetra hifidy ny laharana faha-13 ny tenany ary nentaniny koa ireo tsy nifidy hanefa ny adidiny amin’ny 19 desambra. Nohitsiny fa tsy mpanavakavaka ary tian’ny Malagasy iray manontolo ny kandidà Rajoelina. “Hanampy ny tanora, ny tsy an’asa, ny raiamandreny sy ny Malagasy rehetra ny tenako. Ho tonga aty aho hitondra ny fotodrafitrasa hotanterahina eto rehefa voafidy. Voalaza hatrany fa firenena anisan’ny mahantra indrindra i Madagasikara. Fotoana izao hanovana ny tantara”, hoy ny kandidà Rajoelina. Nitohy tany amin’ny kaominina Anjahana, Maroantsetra izany. Naneho ny fanohanana ny mpanorina ny IEM ireo ben’ny Tanàna 20 any an-toerana.